Home Wararka Dibada Mareykanka: Nin hubeysan oo toogasho wadareed ku dilay 21 ruux oo Arday...
Mareykanka: Nin hubeysan oo toogasho wadareed ku dilay 21 ruux oo Arday u badan!
Nin hubeysan ayaa toogasho wadareed u geystay 21 ruux oo kala ah 19 Carruur ah iyo labo qof waaweyn kaddib markii uu galay dugsi hoose oo ku yaalla Gobolka Texas ee Dalka Mareykanka sida ay sheegeen saraakiil katirsan Hay’adaha ammaanka Dalkaas.
Booliiska ayaa toogtay Nin ku eedeysan toogasho wadareedkaan oo da’diisu ay ku sheegeen 18 sano, Dadka uu laalay waxaa kamid ah Ayeydiis, waa uu baxsaday balse Shil ayuu ku galay Gaarigii uu ku cararayay si aanay gacanta ugu dhigin Hay’adaha ammaanka.
Dugsiga Hoose ee Robb oo ku yaalla Magaalada Uvalde ee Gobolka Texas oo ah goobta uu toogashada dadka uu ku laayay uu ka fuliyay Ninkaan markii dambe ku baxay Gacanta Booliiska, waxaa lagu dilay Magaalada San Antonio oo 130 KM dhanka Galbeed uga beegan Gobolka Texas.
Weli si dhab ah Booliisku uma soo bandhigin sababta keentay in Ninkaan uu beegsado goobta Waxbarashada isla markaana uu dilo 21 ruux oo 19 kamid ah ay yihiin Carruur, Hay’adda FBI-da ayaa dabagal ku heysa kiiskaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Shacabkiisa ugu baaqay in ay u istaagaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen falalkaan oo kale, waxa uu amray in calanka hoos loo dhigo muddo 5 cisho ah si loo xusuusto toogasho wadareedkaas.
Da’da carruurta toogashada uu u geystay Ninka hubeysan ayaa u dhaxeysa 7-10 sano (Todobo ilaa toban sano), Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaas ku tilmaamay mid lagu dabar-goynayo Jiilka Mustaqbalka isaga oo tacsi u diray ehelka carruurtaas.
Previous articleWasiirka Maaliyadda XFS oo sheegay in Danjiraha UK ee Soomaaliya ay kawada hadleen horumarinta dahqaalaha Dalka
Next articleMaxaa looga hadlaya Shir Madaxeedka Midowga Afrika ee ka dhacaya Equatorial Guinea?
Muxuu Beyle ka yiri warka sheegaya in dowladdii Farmaajo ay lacag...
Wararkii ugu dambeeyey xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh
8 caqabad oo horyaalo ra’isulwasaaraha cusub ee Xamza Cabdi Barre